समानुपातिक फेरबदल गर्दै प्रमुख दलहरू : को-को परे समानुपातिकमा ? - samayapost.com
समयपोष्ट २०७४ असोज ३१ गते २:३१
समानुपातिक सांसदका लागि हतारमा सूची बुझाएका दलहरूले अधिकांश नाम फेरबदल गर्दै निर्वाचन आयोगमा बुझाउने भएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहित प्राय: सबै दलले बुझाएको सूची ‘डमी’ मात्र भएको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित मुख्य नेताहरू प्रत्यक्षबाट प्रतिनिधिसभाका लागि चुनाव लड्दै छन् । ११ जना स्थायी समितिका सदस्यमध्ये ५ जना समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार भएका छन् ।
आयोगमा आइतबार बुझाइएको समानुपातिक सूचीमा स्थायी समिति सदस्यहरू मुकुन्द न्यौपाने, अमृत बोहरा, डा. पुष्प कँडेल, सोमनाथ प्यासी र केशव बडाल रहेको पार्टी स्रोतले कान्तिपुरलाई जनायो ।
अन्य नाम बुझाइए पनि स्थायी समितिले पास नगरेकाले व्यापक फेरबदल हुने भएको छ । ‘केही वरिष्ठ नेताहरूबाहेक अन्य नामका सन्दर्भमा सोमबारदेखि नै छलफल सुरु भएको छ । पार्टीले चाँडै अन्तिम नामावली तयार पार्नेछ,’ पार्टीका एक सचिवले भने ।
कांग्रेसका पनि शीर्षदेखि अधिकांश केन्द्रीयस्तरका नेता प्रत्यक्षबाटै चुनाव लड्ने भएका छन् । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालासहित अधिकांश केन्द्रीय सदस्य प्रत्यक्षमा लड्दै छन् ।
यसअघि समानुपातिकबाट उम्मेदवार रहेकाहरू पनि धेरैजसो प्रत्यक्षमै चुनाव लड्ने भएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले अपवादबाहेक यसअघिका समानुपातिक सांसदलाई उम्मेदवार नबनाउने निर्णय लिएको थियो । यस्तो अपवादमा धेरैजसो महिला नेत्री परेका छन् ।
कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भने यसपटक समानुपातिक उम्मेदवारमा छन् । झापा ३ बाट चुनाव लड्ने ठानिएका सिटौला राप्रपासँगको गठबन्धनपछि समानुपातिकमा बस्ने भएका हुन् ।
राप्रपाको प्रभाव रहेको उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन चुनाव लड्ने सम्भावना छ । सिटौलासहितको नाम समानुपातिकमा राखेर कांग्रेसले आयोगमा सूची पेस गरेको छ ।
ती नाममा हेरफेर गरिने पार्टी नेताहरूले जनाएका छन् । आयोगले बन्दसूचीमा रहेका समानुपातिकका नाम कात्तिक १२ भित्र संशोधन गर्ने सीमा तोकेको छ । आइतबार बुझाइएका बन्दसूची सच्याउन, संशोधन गर्न र नाम फिर्ता लिन, दाबीविरोधजस्ता विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोगले मंसिर ३ गते अन्तिम रूप दिनेछ ।
कांग्रेसमा यसअघि रुपन्देही ३ बाट झिनो मतले चुनाव जितेका बालकृष्ण खाँड यसपटक समानुपातिक उम्मेदवारमा छन् । आफू चुनाव हाँक्नका लागि समानुपातिकमा बसेको खाँडले बताए । पार्टी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसमेत यसपटक समानुपातिकमा छिन् । उनी सिरहा ३ बाट यसअघि निर्वाचित थिइन् । केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना यसपटक पनि समानुपातिकमै परेका छन् ।
डिना राप्रपासँगको गठबन्धनकै कारण समानुपातिकमा गएकी हुन् । ‘अझै प्रत्यक्षमै चुनाव लड्ने इच्छा छ, लबिङ पनि गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘समानुपातिकमा बस्ने रहर छैन ।’ उपाध्याय यसअघिका दुवै चरणमा समानुपातिकबाट सांसद भएकी थिइन् ।
पार्टी उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको १ सय १० वटै सिटमा र ७ वटै प्रदेशका लागि समानुपातिक उम्मेदवारी दिइएको बताए । कान्तिपुरबाट